Brezila : Ny Niobium, Harem-pirenena Amidy Mora · Global Voices teny Malagasy
Brezila : Ny Niobium, Harem-pirenena Amidy Mora
Voadika ny 31 Oktobra 2011 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Italiano, Español, polski, русский, Português
Ny niobium dia isan'ireo metaly ampiasaina betsaka indrindra manerana izao tontolo izao, ka i Brezila no manana ny tahiry betsaka indrindra amin'io harena ankibon'ny tany io eto an-tany. Na izany aza, ny fitrandrahana azy any Brezila dia mampametraka fanontaniana maro mikasika izay mba vokatra entiny ho an'ireo orinasa tsy miankina na orinasam-panjakana.
Araka ny ambaran'ny bilaogy Nióbio do Brasil [teny portigey], natao manontolo ho amin'ity metaly ity,
Sary sokitry ny Tableau Périodique maneho an'i Niobé, olona manan-tantara amin'ny angano grika izay nanome ny anarany ho an'ilay kasinga Niobium Nb41. Zon'ny mpamorona an'i Annette Haines (sary nampiasaina miaraka amin'ny fanomezan-dàlana avy aminy).
ny fampiasana tena mavesa-danja indrindra ny niobium dia ny fampidirana azy amin'ireo taharo samihafa mba hananany toetoetra ambony kokoa noho ny ‘acier’, indrindra fa ho an'ny ‘acier’ manana hamafisana avo ary tsy ampiasaina loatra amin'ny fanamboarana fiara na ireny fantsona be fitondràna entona manana tsindry avobe ireny. Ity metaly azo volavolaina ity, manana ny mari-pamantarana Nb sy ny laharana atomika 41, dia manana hamafisana faran'izay tsara ary azo jerena amin'ireny fiaramanidina ‘à réaction’ mampiasa ‘turbines’ ireny sy any amin'ny toeram-panamboarana sambo sy ireny fanaovana fantsona manana savaivo goavana be ireny izay ampiasaina ho an'ny asa vaventy. Noho ny fitrandrahana azy sy ny fampiasàana azy tsy mitsaha-mitombo tato ho ato, dia niova ihany koa ny vidiny.
Raha araka ireo angona [en anglais] navoakan'ny fitantànana ao Etazonia, i Brezila no manana ny 95% amin'ny tahiry erantany amin'ny niobium, ary izany dia ao amin'ny faritr'i Minas Gerais, Amazonas sy Goiás. Roberto Silva, mpanoratra ao amin'ny tranonkala Economia BR, dia manoratra [en portugais] fa,
rehefa nandalina ny fitambaramben'ny tahirim-pirenena amin'ny niobium, (…) saiky avy amin'ireo tahiry rehetra voamarina, azo eritreretina sy azo antoka, dia miavaka voalohany indrindra ny ao Amazonas, izay ny tahiriny amin'ny niobium dia manome ny 82,7% amin'ny fitambaran'ny ao Brezila manontolo ary ao amin'ny kaomina São Gabriel da Cachoeira no misy an'izany.
Tamin'ny 2011 ity harena ankibon'ny tany ity dia namidy [teny Anglisy] 44 dolara ny kilao. Raha anaovana fampitahàna, ny taona 2007 io harena ankibon'ny tany io dia namidy tamin'ny salam-bidy [en anglais] 52 dolara ny kilao.
Sary an'i Greg Robson (CC BY-SA 2.0)
Tamin'ny 2006, ny vokatra niobium eran'izao tontolo izao dia novinavinaina [teny anglisy] ho 59 900 taonina, ary Brezila no namokatra ny 56 000 taonina tamin'io. Ao anaty lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ilay tranonkalan'ilay [teny anglisy] orinasa kanadiana mpitrandraka harena ankibon'ny tany Taseko Mines Limited, amafisiny fa amin'izao fotoana,
Mitombo be ny filàna niobium. Ny fanjifàna isan-taona manerana izao tontolo izao amin'ny ferro-niobium dia maherin'ny 200 tapitrisa livres isan-taona, ary mitombo 5% hatramin'ny 7% isan-taona izany.
Ny 200 000 000 livres dia mifanandrify amin'ny 90 718 taonina. Izany hoe, na dia nidina aza ny salam-bidiny tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny fitrandrahana sy ny fampiasàna azy kosa dia nitombo be manerana izao tontolo izao.
Ao anaty lahatsoratra iray [teny portigey] nosoratan'i Victor Tagora ho an'ny gazetiboky Meio Ambiente, ary ao anatin'izany no andefasany fampitandremana momba ny anjara toerana stratejika tànan'ny niobium eo amin'ny toekarena Breziliana, ny mpanoratra dia miteny fa,
avy aminà loharanom-baovao azo antoka no miteny fa ny harena ankibon'ny tany niobium amin'ny endrika voajanahary novinidy teny amin'ny toerana nitrandrahana azy dia 400 réaux ny kilao, eo amin'ny 255 $ ny kilao (amin'ny sandam-panakalozana ny dolara amin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra) [eo amin'ny 260 €/kg tamin'ny fotoana nandikàna ity lahatsoratra ity]
ampahanà tariby natao tamin'ny taharo niobium-titane. Sary an'i Swamibu (CC BY-NC 2.0)
Na dia ambony lavitra noho izay vidiny asehon'ny sasany amin'ireo tarehimarika iraisam-pirenena aza io vidy io, manao famintinana toy izao ny mpanoratra
Raha toa i Brezila manondrana niobium amin'io vidiny io, izany dia hanome antontam-bola US$ 15 300 000 000 isan-taona. Raha ampitahaintsika amin'ny antontan'isa ofisialy io isa io, dia ho gaga isika mahita fa any amin'ny 16 300 000 dollars (izany hoe 0,1 % amin'ny isa nomena ery ambony), ary amin'ny hadiry 515 taonina (latsaky ny 1 % amin'ny fanjifàna erantany).
Na ohatra aza ka hanao kajy miainga amin'ny hoe 44 dolara ny kilao, sy raha raisina ny vinavina hoe 95% amin'ny vokatra erantany, dia ho tonga amin'ny antontam-bola 3 792 000 000 dolara/isan-taona isika. Ireo elanelana goavana ireo dia mifandray amin'ny hoe tsy isan'izay tonga eo amin'ny tsenam-bolan'ny harena ankibon'ny tany ity vokatra ity, toy ny London Metal Exchange [teny anglisy], fa ny vidiny dia araka izay ifanarahan'ireo orinasa fotsiny ihany.
Toerana fitrandrahana niobium ao Araxá, Minas Gerais. Sary an'i Revista Decifra-me.
Edvaldo Tavares, mpitsabo sady Tale Jeneralin'ny Sistema Raiz da Vida, dia manazava ao amin'ny tranonkalan'ny Revista Decifra-me [teny portigey], fa
Any amin'ireo toeram-pitrandrahana ao Catalão sy Araxá, ny niobium amin'ny endriny voajanahary, vao avy mivoaka mihitsy ny toeram-pitrandrahana, dia misanda 228,57 dolara ary amidy any ivelany, efa voadio, amin'ny sanda 90 dolara. Ahoana no misy fomba fifampiraharahana ara-barotra toy izany, izay tena manao tsinontsinona tanteraka ny vahoaka breziliana? Tena manamaivana tokoa ny firenena sy tsy firaharahiana ny soa ho an'ny vahoaka breziliana.
Ao amin'ny tranonkalan'ny Ministrena'ny Fampandrosoana, ny Indostria ary ny Varotra Ivelany [teny portigey], ireo angona momba ny fifandanjana ara-barotra breziliana dia manondro ireo tontalim-bola isaky ny vokatra naondrana, isan'ireny ny alimo sy ny vy. Tsy hita anatin'io lisitra io ny niobium.
Mazava loatra, tsy maintsy raisina anaty kajikajy ireo fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ara-tsosialy raha vao resaka fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Kanefa, miaraka amin'ireo harena rehetra ao ankibon'ny tany Breziliana ireo, tsy vita ny tsy hanontany hoe iza no mahazo tombony amin'ny niobium.